संरक्षणका लागि ब्लगिङ (Blogging4Conservation]: वातावरण | Conservation Blog in Nepal
धेरै पटक बाहिरबाट चक्कर लगाएको थिएँ तर पशुपतिनाथ परिसरमा तीन पटक मात्र पुग्ने अवसर मिल्यो , पहिलो र दोस्रो पटक विदेशी साथीहरूसँग गएँ । पहिलो र दोस्रो पटकको यात्रामा बागमती विशेष गरी पशुपति आर्यघाट परिसरको दृश्यले केही सिर्जना गरायो । साँच्चिकै बागमती बनेर मैले त्रिशूलीलाई चिठी लेखें रसुवा खबर साप्ताहिक मार्फ, पछि त्रिशूली बनेर चिठी फर्काएँ पनि ।
यस पटक नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका सचिव मौषम खनालले फेसबुक मार्फत Event बनाउनुभएको कारण मलाई फेरि त्यही पुर्यायो । छोटो समयको अन्तरालमा नै मैले बागमती संरक्षण वा नयाँ बागमतीका लागि केही हुन लाग्यो वा भइरहेकै रहेछ भन्ने बुझन पाएँ । विशेष गरी रिभर अफ पिसका विन्दुराज अधिकारीको प्रतिबद्धताले हामी सबैलाई उत्प्रेरणा दिएको छ । 'बगैचा बन्दैछ, रुख विरुवा रोप्दैछौं, नयाँ बागमतीको थालनी भएको छ, अहिले देखिएको छैन, भोलि पाउनुहुन्छ' बस् उहाँको यी मन्तव्यले नयाँ बागमतीको सम्भावनालाई नजिक्याएको भान भयो ।
बागमती, विष्णुमतीमा पूजा गरिरहँदा हामीले फोहोर व्यवस्थापनलाई नियाल्यौं कि नियालेनौं' भन्ने उहाँको आवाजले पशुपति दर्शन वा पूजा गर्नेलाई पाठ सिकाइरहेको थियो । नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेको कुनै जातिय विशेषको नभई बागमती सबैको संस्कृतिको खम्बा हो भन्ने शब्दहरूले त्यहाँको सांस्कृतिक अवस्थालाई पुन परिचित गराउँदै थियो । हिमालय क्लाइमेट इनिसियटकी शिल्सिला आचार्य, याक्ट अफ लिभिङका आशिष चौलागाइँ, युथ एलाएन्स फर इन्भाइरोन्मेन्टका सनथ अधिकारीको सहभागिता बागमती संरक्षणमा हातेमालो गर्ने युवा जोस र जाँगरको दरिलो पाठ बनिरहेको थियो । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ कलेजका विशाल ज्ञवालीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि रोवर्ट बनाउने र परिचालन गर्ने भन्ने उद्घोषले व्यवसायिक र व्यवहारिक शिक्षाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो । मौषम खनालले उद्घोष गरिरहँदा आर्यघाट परिसरमा संरक्षणका लागि सन्देश प्रवाह भइरहेको थियो ।
केही व्यंग, केही उमंग, केही प्रेरणा र केही चेतनाका साथ बागमती महोत्सव उद्घाटन भयो । १४नदीका पानीको सम्मीश्रण, हरियो काठमाडौं र सफा बागमती, सगरमाथा हाम्रो ताज हो, बागमती हाम्रो लाज हो जस्ता नारा, साना बालकसहितको सहभागितामा बाजागाजा, राष्ट्रिय भावनाले गाँजिएको गीतको गुञ्जाहट, सहभागी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको बागमती संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता र हिन्दु तथा धर्म गुरुका बागमतीप्रतिको सद्भाव तथा सहभागीहरूद्वारा फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन त्यस क्षणको महत्वपूर्ण गतिविधिहरू हुन् । उद्घाटन पछि राष्ट्रिय भावनाको गीत 'यो नेपाली शीर उचाली, संसारमा लम्कन्छ, जुन किरी झैं ज्योति बाली अन्धकारमा चम्कन्छ' घन्काउँदै बागमती किनार सफाइका लागि सबैका हातमा फोहोर संकलन गर्ने औजार तथा फोहोर संकलन दृश्यले साँच्चिकै टेलिभिजनमा राष्ट्रिय गानका शव्यदृश्य भइरहेको भान भएको थियो । नदीको किनारमा बाजागाजासहित धर्मगुरु, पत्रकार, सफा बागमती अभियानका सहयोद्धाहरूले तँछाड मछाड गर्दै फोहोर टिप्दै गर्दा थोरै बेरमा नै बागमती किनारको केही भाग परिवर्तन भयो ।
अहिले बागमती महोत्सवलाई सम्झँदै गर्दा, मैले त्रिशूली बनेर बागमतीको पत्रको जवाफ फर्काउँदाको केही हरफहरू स्मरण गर्दैछु । बागमती संरक्षणको लागि जैविक मल र ग्याँस बनाउन सके साँच्चिकै सफा गर्न सकिन्छ भनी त्रिशूली बनेर लेखेको हरफहरू साभार गर्न चाहन्छु । काठमाडौंका फोहोर व्यवस्थापन गरी मल र ग्यासको उद्योग सञ्चालन गर्न सके
१. रोजगारी सिर्जना वा वेरोजगारी समस्या समाधान ।
२. रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा बृद्धि, जसबाट गुणस्तरीय कृषि उत्पादन तथा महंगो मलको प्रयोगमा कमी आई आर्थिक व्ययभार कम हुने ।
३. ग्यास उत्पादन भई सरल रूपमा ग्यासको उपलब्धता, आर्थिक विस्तार हुने ।
४. वातावरण संरक्षणमा टेवा पुगी मानव स्वास्थ्य सुधार, जसबाट स्वाथ्योपचारमा हुने खर्च कम हुने ।
५. पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना बढ्ने ।
६. नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने भन्ने भाषण काममा परिणत हुने ।
बागमती संरक्षण अभियानमा खटिएका सहयोद्धाहरू बागमतीको संरक्षण नयाँ पुस्तालाई नयाँ स्वच्छ बागमती र हराभरा काठमाडौं, पानीसहितको बागमती दिन सकुन् भन्ने शुभकामनाका साथ ।।
Also See here : Meroreport.Net
Posted by Prem Prasad Paudel Posted on Monday, June 11, 2012 with No comments
मिति : २०६८ मंसीर ७ गते
आदरणीय दिदी वागमती,
म यहाँ आरामै छु । तपाइँले पठाउनु भएको चिठी मैले पाएँ । लामो समय पछि सम्झनु भएछ । मनमा केही हर्षर विष्मात लिएर यो जिन्दगी बिताइरहेको छु । तपाइँले भने जस्तै परापूर्वकालदेखि आफ्नो स्वरूप कायम गर्दै जीवात्माको बैतरणी सरह भएर बगिरहेको छु । तर लामो समयदेखि तपाइँ र उपत्यकाका धेरै बुद्धिजिवीहरूको नजरमा बहन नसकेका दिदीहरूको स्वरूप विरूप हुँदा म पनि विचलित भइरहेको छु ।
तर जे होस् तपाइँहरूको सत्य रूप मानवले कल्पना गर्न नसक्ने भए पनि ठूलादेखि सानासम्मको देहत्याग तपाइँहरूकै किनारमा भएको छ । यसमा तपाइँहरूले पनि गर्व गर्नु पर्दछ । तपाइँहरूको वक्षस्थलमा मानवले जानेर वा नजानेर गरेको फोहोरले तपाइँहरूको स्वरूपमा विखलन त ल्याएको छ तर त्योभन्दा बढी वातावरण प्रदुषित भई रोगव्याधीले मानवलाई पनि ठूलो असर पुर्‍याएको छ । आज देशका कुना कन्दारामा विकास वा वातावरण संरक्षणका लागि काम भइरहेका छन् तर राज्यको मुटुमा किन मानव चेतना जागरण हुन सकेन - यो प्रश्न मेरो तर्फाट सम्पूर्ण मानव जगतलाई गर्न चाहन्छु ।
देशमा धेरै परिवर्तन आए । वि.सं २००७ देखि हालसम्म परिवर्तनका निमित्त गरिएका विभिन्न आन्दोलनहरूले राज्य सत्तामा कसलाई पुर्‍याउने भन्ने मात्र उपलब्धिहरू भए । ठूला साना विदेशी तथा स्वदेशी संघसंस्थाहरूले कहिले कर्णाली जस्तो सुदूर पश्चिममा त कहिले दुर्गम जिल्लाका नाममा धेरै बस्तीहरूमा उज्यालो कार्यक्रमहरू ल्याए, तर कार्यक्रम ल्याउनलाई उपर्युक्त कर्मथलो बनाएका राजधानीका गल्लीमा तिनै मानवका व्यवहारले भएको नकरात्मक परिवर्तनलाई कसैले ध्यान दिन सकेकन् । केही समय अघिदेखि वागमती संरक्षण कार्यक्रम आउने हल्ला पनि मैले सुनेको थिएँ, तर आज त्यो कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ? त्यसको कुनै मालुम छैन ।
म पनि यहाँ केही कुराहरूमा असन्तुष्ठ छु । हुन त नेपाल राज्यमा मैले सोचेको प्रविधि आउनको लागि हजारौं वर्षलाग्ला । मानव देह डढाउने निहुँमा भएको प्रदुषणलाई निर्मूल गर्न धेरै दिन लाग्छ मलाई । गाउँगाउँबाट आएका लाशलाई राम्रोसँग नडर्ढाई मेरो किनारमा फाल्नाले प्रदुषण फैलिरहेको छ । विदेशका मुलुकमा पनि राम्ररी नभित्रिएको लाश जलाउने विद्युतीय प्रविधिको यहाँ कल्पना पनि गर्न सकिन्न । आफू राम्रा महलमा बस्ने अनि दगुर्दै आएर मेरो किनारमा दिशापिशाव गर्ने मानवको व्यवहार आज एक्काइसौं शताब्दिको संघारमा पनि सुध्रन सकेको छैन । कहिले यज्ञ लगाउने निहुँमा मेरो किनारमा फोहोर गरी पुण्य कमाउन खोज्नेहरू पनि धेरै छन् । केही वर्षअघि वर्खामा राम्चेलगायतका पहिरोबाट मेरो वक्षमा बज्रन आएका मानवहरूलाई सम्झदा त्यस्तो दिन पुःन नदोहोरियोस् भन्ने कामना गरिरहेको छु ।
दिदी, परापूर्वकालमा जसरी उत्पन्न हुनुभएको थियो, तर आज तपाई मानव महलबाट प्रदुषित भएर बहनुमा तपाईको दोष छैन । बरु मानव देह पुण्यमा परिचित तपाईको मार्गमा शौचालय तथा ढल मिसाउन हुन्न भन्ने कुरा मानवले पनि बुझनु पर्दछ । तर त्यहाँको समस्या समाधान गर्नको लागि निकै समय लाग्न सक्छ । जसरी फोहोरका गुजुल्टाहरूमा अल्झिएर तपाईंहरू हराइरहनु भएको छ । त्यसरी नै तपाईंहरूको वेगले ती फोहोरहरूलाई हुत्याउन सक्ने क्षमता कायम हुन आवश्यक छ । यदि तपाईंहरूको वेग ती फोहोर हुत्याउन सक्ने भएमा फेरि मानवका महल तथा बस्ती नै हुत्तिन सक्छन् । तर त्यस्तो समय आउन नदिन पहिलो उपाय भनेको फाल्नुपर्ने वा जीवनभर प्रयोग गर्न नसकिने बस्तुको प्रयोग नगर्ने, दोस्रो अबदेखि त्यस्ता फोहोरहरू नफाल्ने र तेस्रोमा फालिएका फोहोरलाई पुनर्स्थापना गर्ने । यी तीन विषयलाई ध्यान दिन सके स्वरूप कायम हुन नसके पनि वा सानै स्वरूपमा भएपनि निर्मल र सफा भएर बग्न पाईन्छ कि भन्ने हो । यसको लागि हामी टाढा रहेका शुभचिन्तकहरूले कामना गर्नै पर्दछ ।
मैले कहिलेकाही खबरहरू सुन्ने गर्दछु 'फोहोर व्यवस्थापन गरी कम्पोष्ट मल बनाएको ।' नेपाली भूमिमा विदेशी मुलुकबाट आएका रासायनिक मल पर्याप्त नभएर किसानहरू लाठीमुरी गरेको पनि खबरहरू सुन्ने गर्दछु । तर तपाईंहरूको किनारमा फालिएका फोहोरहरूलाई पनि संकलन गरी नेपाली प्रविधिबाट मल बनाएर प्रयोग गर्नेतिर मानवका ध्यान किन जादैनन् - फेरि तपाईंहरूको किनारमा पुग्दा आउने दुर्गन्धलाई कैद गरी ग्यास उत्पादन गर्न सकिने पनि होला । नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने भन्ने नेताहरूका भाषण काममा केन्द्रीत हुन सक्नु पर्दछ । तर कुरा मात्र गर्ने, व्यवहारमा सिन्को नभाँच्ने नेताहरूको जन्म हुनु नै तपाईंलगायतका पवित्र नदीहरूको दुर्दशा हुनु हो । अर्काको परिश्रमले बनाएको स्वीट्जरल्याण्ड हेरेर त्यस्तै बनाउँछु भन्न जति सजिलो छ, यहाँको समस्या समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन । तर त्यही अनुरूप कार्य गर्न गाह्रो भएपनि त्यसपछिका फाइदाहरू निकै छन् । मलाई लाग्छ, काठमाडौंका फोहोर व्यवस्थापन गरी मल र ग्यासको उद्योग सञ्चालन गर्न सके उल्लेखित फाइदा हुने मैले अनुमान गरेको छु ।
जे होस् मानव व्यवहारमा परिवर्तन हुने सके माथिका विषवस्तुहरू सम्भव छन् । म आज कंसलाई पहिलो छोरो बुझाउन पर्दा र सकेसम्म नबुझाउन प्रयास गर्नु, पुरुषले गर्दा नसकिने कुरो छैन भनी देवकीले वसुदेवलाई भनेको यो श्लोक सम्झन्छु 'गर्दामा नहुने कुरो पुरुषले केही पनि देखिन ।' उपत्यकामा बग्ने नदीहरू र मानव जगतकै कल्याणका निमित्त माथिका विषयवस्तु भनौं या योजना व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सके सबैको जित हुनेमा म विश्वस्त छु । बाँकी अर्को पत्रमा ।
उही तपार्इंकी बहिनी,
गोसाइँकुण्ड, फोहोर व्यवस्थापन र संरक्षण : आजको आवश्यकता
Posted by Prem Prasad Paudel Posted on Saturday, June 02, 2012 with No comments
वातावरण दिवस विशेष
गोसाइँकुण्ड धार्मिक, जैविक, ऐतिहाँसिक तथा सांस्कृतिक महत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएको छ । सन् २००६ मा रामसार क्षेत्रमा सूचिकृत भए लगत्तै गोसाइँकुण्ड संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजनाले गोसाइँकुण्डको संरक्षणका लागि 'स्थलगत व्यवस्थापन योजना' तयार गरेको छ र सो योजना नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमोदन भइसकेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजनाका प्रवन्धक गौतम पौडेल बताउनुहुन्छ ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजनाले गोसाइँकुण्ड संरक्षणका लागि बनाएको योजना वा संरक्षणार्थ सञ्चालन गरिएका विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरूले गोसाइँकुण्डको दीगो संरक्षणमा सहयोग अवश्य नै पुर्‍याउँदछ । गोसाइँकुण्ड वरपर भएको जैविक तथा अजैविक फोहोर र मानवीय अतिक्रमणका कारण खतराको सूचिमा परेको भनेर रामसार क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय स्वीटरजरल्याण्डले नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयलाई खबरदारी गरेको मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजनाले बताएको छ । सो खबरदारी पत्रको उत्तर पठाइसकिएको छ ।
विभिन्न संघसंस्था वा स्वयं सेवाको नाममा प्रत्येक वर्षगोसाइँकुण्ड मेला पश्चात फोहोरहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाईन्छ । तर बाटो वरपरका फोहोर टिपेर तलतिर ल्याउँदैमा संरक्षण हुन्छ भन्ने हैन । होटल व्यवसायीले बाटोभन्दा परसम्म पनि प्लाष्टिकजन्य, सिसाजन्य अजैविक फोहोरहरूलाई जथाभावी फ्याँक्ने गरेका छन् । त्यस्तो कृयाकलाप चाहिँ गोसाइँकुण्ड रामसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि चुनौतिपूर्ण छ भन्ने लाग्छ ।
वातावरण दिवसको अवसर पारेर यसवर्षटानले गोसाइँकुण्ड तथा लाङटाङ क्षेत्रमा बाटो वरपरका फोहोर टिपेर काठमाडौं ल्याउँदैछ भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा यति धेरै चुनौति भइरहेका बेला लाङटाङ तथा गोसाइँकुण्डको फोहोर यहाँ ल्याएर कसरी राम्रो गरियो भन्न सकिएला ? २/४ जना भरिया लगाएर त्यहाँको फोहोरलाई फोहोरै फोहोरको शहरमा ल्याउनु भन्दा त्यहाँ नै स्थानीय बासिन्दाद्वारा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेसम्म भएका फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै अब फोहोर फ्याक्नु हुन्न वा फोहोरलाई पुन प्रयोग गर्नुपर्छ वा सकिन्छ भन्ने पाटोमा चेतना जागरण गर्न सके जुनसुकै स्थानको पनि फोहोरले निम्त्याउन सक्ने खतरा कम हुन्छ ।
फोहोर बटुल्ने र अन्यत्र ल्याउने अभियान कति वर्ष गर्ने ? हुन त कुनै संघसंस्थाको नाम र दामका लागि पनि यस्तो अभियान सञ्चालन गरिराख्न पर्ने हुनसक्छ । जबसम्म स्थानीयस्तरमा नै फोहोर व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म संरक्षणका लागि चुनौति कम हुने छैन । हुन त कुनै पनि संस्थाहरूले कार्यक्रम बनाएर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनु तथा त्यहाँ गएर पर्यटकीय आनन्द लिनु अथवा आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि सहभागी हुनुलाई राम्रो मान्नु पर्दछ ।
Labels: पर्यटन, वातावरण
वागमतीको चिठी त्रिशूलीलाई
प्रिय बहिनी त्रिशूली,
आ राम रही आरामै चाहन्छु ।
मनभरी पीर र बेदनाका पोका अँगालेर बाँचिरहेको छु । धमिल मनका बीचमा आस्तिकका बीच बैतरणी जस्तो त नास्तिकहरूका बीच फोहर व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छु । समयको अन्तरसँगै मानव व्यवहारका कारण आफ्नो रूप बिकलाङ्क हुँदा पनि मनमा सन्तोष कैद गर्न विवश छु । आशा छ मेरो जस्तो अवस्थाबाट तिमी निकै दूर छौ ।
आजभोलि तिमीलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गर्न पनि निकै अप्ठ्यारो महशुस हुन लागेको छ मलाई । उमेरले मात्र दिदी बहिनी बनायो हामीलाई । पालन, पोषण र रेखदेखका बाबजुद आज म तिम्रो बहिनीको जस्तो रूपमा सिमित हुन पुगेको छु । म आजभोलि मेरो कर्तव्य पुरा गर्न नसकेको कारण आफ्नो जीवनलाई धिक्कारिरहेको छु । मानवको मन र मस्तिष्कलाई पुण्यात्मक बनाउन म चुकेको छु जस्तो लाग्छ मलाई । आजभोलि म प्रतिको मानव वितृष्णा देख्दा आफूलाई जन्मनु र हुर्कनुको कुनै महत्व नभएको महशुस गरिरहेको छु ।
सञ्चारका कारण संसारले फड्को मार्यो तर मेरो दिनानुदिनीमाथि प्रश्न चिन्ह देखा परिरहेको छ । मैले तार्ने गरेको मानव देहलाई आज पुण्य प्रदान गर्न सकेको छैन । म बहनुमा निकै चुनौति छ । मानवले फालेका फोहोरका डङ्गुरलाई मेरो गतिले हुत्याउन सकेको छैन । अझ तिनै फोहोरका गुजुल्टाहरूमा अल्झिएर म आफैं बेपत्ता हुन पुगेको छु ।
सत्ययुगमा महादेवको त्रिशूल प्रहारबाट उत्पत्ति हुँदाको तिम्रो रूप आज पनि कायमै छ । तर मेरो हालको बहावको अवस्था र परापूर्वकालमा भएको उत्पत्तिको व्यतिरेकी सम्बन्ध छ । जसरी म उत्पत्ति भएँ, त्यसको स्वरूप आज छैन । आज म मानवका सुन्दर महलबाट दूषित भएर बगिरहेको छु । फोहोर व्यवस्थापन वा नालीको रूपमा म परिचित हुन पुगेको तिमीलाई पनि अवगत नै होला । म मात्र नभई उपत्यकाका बहिनी विष्णुमति र शालीनदीको पनि अवस्था त्यस्तै छ ।
आज म कल्पना गर्छु किन मेरो पूर्व रूप हराएर मानव शौचालय तथा सफासुग्घर गरेर बहेको दूषित पानीका रूपमा परिचित हुन पुगें ।' यसको उत्तर सबैसँग छन् । मानव चाप, सवारी चापसँगसँगै प्ल्ाष्टिकजन्य वस्तुको विर्सजनस्थलको रूपमा जहिलेबाट मलाई मानवले प्रयोग गरे, जहिलेबाट मेरा किनारलाई भैंसी बधशालाको रूपमा विकास गरे त्यतिखेरबाट नै मेरो स्वरूपमा घुन पुत्ला लाग्दै आयो । आफ्ना घर सफा राख्ने तर नजिकको वातावरण फोहोर गर्ने मानवको व्यवहारले उनीहरूलाई गिज्याइरहेको छ । बुझेर पनि बुझ पचाउने महले मानवका कारण आज मेरो यो अवस्था भएको छ ।
प्राय दिनहरूमा मेरो वरिपरी नाइल, टिस्टा जस्ता दिदीहरूका देशका नागरिक पनि आउँछन् वागमती हेर्न भनेर । तर नाइल, टिस्टा जसरी सुसाएर मानिसलाई आनन्द दिएको छ, मैले कसैलाई पनि त्यस्तो आनन्दता प्रदान गर्न सकेको छैन । अझ लाजमर्दो यहाँ बनाएका छन् कि मेरो आसपासमा बसेर तिनै विदेशीहरूसँग फोटो खिचाएको निहुँमा पैसा माग्ने गर्दछन् हाम्रा देशका साधुसन्तहरू । पैसा माग्दामा नदिएर धार्नी हात उठाउन पनि पछि पर्दैनन् र उनीहरू नै मेरो आसपासमा फोहोर गर्न खप्पिस छन् । धर्मका कुरा गर्नेले मेरो वरिपरी फोहोर आफैंले गर्दा पाप लागेको महशुस पनि गर्नुपर्ने हो ।
तर जे होस् बहिनी म कुण्ठित भएपनि तिम्रो आफ्नो गति कायम रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु । तिमीले आफ्नो शक्तिद्वारा जलविद्युत उत्पादन गरेर जनतालाई अँध्यारोबाट उन्मुक्ति दिएकी छ्यौ । तिम्रो दिदी भएर मैले यस्तो अवसर पाउने सम्भावना यो जुनीमा मैले पाउँदिन होला । लोडसेडिङको समस्याबाट पीडित जनतालाई उज्यालो र्छर्ने मेरो पनि चाहना थियो । तर त्यसको कुनै पनि परिकल्पना गर्न सक्दिन म । तर पनि मैले दिएको योगदान मानव समुदायमा उल्लेखनीय नै छ । फोहोरको डङ्गुर मैले सामना गरेको छु, मेरो वक्षबाट बालुवा निकालेर धेरैका महल ठडिएका छन् । बालुवा व्यापार गरेर कोही सुकुम्वासीले त कोही सुकुम्वासीका नाममा हुकुमवासीले आफ्नो जीवनस्तर परिवर्तन गरेका छन् । मैले दिएको योगदान यस्तै यस्तै हुन् । मेरो पूर्व अवस्थाको त कल्पना पनि गर्न सकिन्न, तर शहरका मान्छेको बुद्धि फिरेमा मेरो रूपमा केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशामा कुरिरहेको छु । पत्र पाउने बित्तिकै मलाई पत्र लेख्न नबिर्सनु। केवल म तिम्रो पत्रको प्रतिक्षामा छु । आउने जानेलाई म त्रि्रो हालखबर सोधिरहन्छु । अहिलेलाई यत्ति नै, भोलिको कुरा भोलि नै, बाँकी अर्को पत्रमा ।